Wararka - Horumarinta Fanka ciddiyaha
Iyada oo dhammaan noocyada kala duwan ee isticmaalka ay soo baxayaan, baahida loo qabo daryeelka ciddiyaha ma muuqan. Laakiin sababta oo ah fadhiidnimada cudurka faafa, markii noocyada kale ee isticmaalka la xaddiday, waxaan si lama filaan ah u ogaanay in farshaxanka ciddiyaha uu si qoto dheer ugu lug lahaa nolosheena.
Xogtu waxay muujineysaa in iyadoo la isku qurxiyo midabka, barafuunnada iyo dibnaha la isku qurxiyo ay arkeen baahida muddada-gaaban oo la xakameeyay cudurka dillaacay awgood, boolisku wuxuu arkay koritaan liddi ku ah, iyadoo iibku kor u kacay 179% sannadkiiba.
Horumarinta farshaxanka ciddiyaha
Taariikhda ugu horraysa ee la duubay ee ku saabsan farshaxanka ciddiyaha ayaa ah xilligii Masaaridii hore. Dadku waxay u adeegsan jireen macdanta, cayayaanka iyo berry maaddooyinka si ay u qurxiyaan ciddiyaha. Nooc ka mid ah xinne oo ridi kara ciddiyaha midab cas oo weyn ayaa sidoo kale kasbatay magaca xinne.
Dalka Shiinaha, astaantan jireed ee awoodda ayaa ka bilaabatay boqortooyadii Shang 1600 BC. Ganacsadayaasha Yin -ga ah waxay isku qaseen xanjo Carabi, gelatin, shinni iyo ukun cad cad waxayna ku masaxeen ciddiyahooda, ugu dambayntii waxay ku marsiiyeen midab cas oo qoto dheer ama ka samaysan.
Qaabaynta midabaynta ciddiyaha ayaa horeba ugu baahnayd Boqortooyadii Tang. Waqtigaas, maaddada ugu weyn ee la adeegsaday waxay ahayd ubax Fenghuang. Ka dib markii la jajabiyey ubaxyadii oo lagu daray alum, dhogor xariir ah oo dhuuban ayaa la miiray oo lagu rinjiyeeyay dusha ciddiyaha, iyo dhowr jeer oo soo noqnoqoshada ah, waxay joogi doontaa bilo.
Farshaxanka ciddiyaha casriga ahi wuxuu bilaabmaa xilligii dambe ee Fiktooriya. Waqtigaas, farshaxanka ciddiyaha waxaa lagu samayn jiray habkii hore ee lagu buufin jiray rinjiga. Sida ay u qaadatay maalmo badan in rinjiga baabuurku engego, ayay ku qaadatay maalin dhan in labada gacmood ay engegaan.
Waxay ahayd kaliya qaangaarnimada tikniyoolajiyadda rinjiyeynta baabuurta ee 1920naadkii oo ciddiyaha ciddiyaha ay ka go'een keli -taliskii aristocracy -ka oo si tartiib tartiib ah u noqday wax caadi ah. Saamaynta bilicsanaanta ee aktarada Hollywoodka, fikradda ah “gacmuhu waa wajiga labaad ee haweeneyda” ayaa bilaabatay inay qabsato.
Majalladaha haweenka ayaa soo baxay, iyagoo ka hadlaya sida loo daryeelo ciddiyaha oo loo qariyo shaqadooda dhabta ah. Dumarku waxay galayeen saloon -gacmeedyada waxayna ku soo galeen gacmo qallafsan oo u eg inay digirta dhulka ku garaaceen gacmahooda qaawan oo ay ka soo baxeen si jilicsan oo siman oo aad iyo aad u fiican.
The Kooxda YaQin Sanding Band waxaa loo isticmaalaa ka saarista ciddiyaha. Ma aha oo kaliya waxaan u isticmaalnaa alaab ceeriin ah oo aad u fiican gudaha band sanding brown, laakiin sidoo kale waxaan u isticmaalnaa alaabta ceeriin ee laga soo dhoofiyo Japan madowga iyo band ciid cad iyo USA Norton oo loogu talagalay koox ciid ciid ah. Qaabkeedu wuxuu la mid yahay tuubbo wareegsan, qeybta dhexena waa godan tahay. Udub dhexaadkeedu waa guduud, malaha xabagta warshadaha, iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada isku xidhka cusbi. Kooxda bacaadka ee ku xiran xabagta wuxuu hubiyaa in badeecadu aysan sun ahayn oo bay'ada u fiican. Xabagta ayaa si siman loo qaybiyey. Ma jiro xabag dheeraad ah oo daatay. Furitaan ma jiro. Gooyuhu waa siman yahay oo ma laha burrs. Way fududahay in la dhajiyo cidhifyada ciddiyaha waana fududahay in la maareeyo shaqada dusha ciddiyaha.
Tilmaamaha Kooxda YaQin Sanding Band
1. Tayo sare oo laga keenay marada maro-harada leh ee laga keenay USA
2. Degganaansho sare iyo ciriiri la'aan.
3. Cabbirka guud, raridda fudud iyo dejinta.
4. Heerka cilladu wuxuu ka hooseeyaa 1 ％.
5.Waxaa lagu talinayaa isticmaalka la tuuro.
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha baandada,fadlan nala soo xiriir.
Waqtiga dhejinta: Jul-31-2021